လူသိနည်းသော ကွန်ပျူတာ အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း | တောရက်စ် (mc)
လူသိနည်းသော ကွန်ပျူတာ အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
အိန္ဒိယမှ လေ့သာသူတစ်ဦး၏ ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရှိချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၄င်းမှာ ကွန်ပျူတာ၏ မည်သည့် နေရာ( Desktop, Local Disk C, D, E, etc………………) တွင်မဆို Folder များဖန်တီးရာတွင် CON ဟူသော နာမည်ပေး၍မရပါ။
စာဖတ်သူတို့ Folder တစ်ခုကို con လို့အမည်ပေးပြီး ဖန်တီးကြည့်ပါ။ ယင်းကဲ့သို့ အမည်ပေးလို့မရနိုင်ကြောင်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Posted by တောရက်စ် (mc) on March 29, 2012 in ဘလော့များ.	1 Comment
55555komin says:	February 3, 2013 at 11:06 am	သိပ်ကောင်းပါတယ်ဗျား..နေက်လည်းရေးပေးပါဦးနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသုံးဝင်သော ဆော့ဝဲများ ဒေါင်းရန်	Createafree website or blog at WordPress.com.	%d bloggers like this: